Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Mumbai HALKA Safarka Xalaasha eHalal Travel Mart
Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Mumbai
Mumbai (Marathi: मुंबई) (xafiiska dalxiiska gobolka), waa magaalo-madax weyn, horay loogu yiqiin Bombay, waa magaalada ugu weyn dalka Hindiya waana caasimada gobolka Maharashtra. Mumbai waxay markii hore ahayd isu imaatin ka kooban toddobo jasiiradood oo ku teedsan xeebta Konkan kuwaas oo muddo kadib lagu soo biiriyay inay samaystaan ​​magaalada jasiiradda ah ee Bombay. Jasiiradda ayaa markeeda ku biirtay jasiiradda deriska la ah ee Salsette si ay u samaysato Bombay Ka Weyn. Magaalada waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 21 milyan (2005), taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu dadka badan.
Mumbai shaki la’aan waa caasimada ganacsiga ee India waana mid kamid ah magaalooyinka ugu badan ee dekadaha ku leh wadanka. Dabeecadda Mumbai ee ah magaalada ugu quruxda badan uguna cosmopolitan-ka Hindiya waxaa lagu calaamadiyey joogitaanka Bollywood magaalada dhexdeeda, oo ah xarunta warshadaha Hindiga adduunka iyo saameynta TV-yada. Sidoo kale waxay hoy u tahay dadka ugu badan ee isku raranta ah ee Hindiya iyo Halyeeyga caanka ah ee loo yaqaan 'Gateway of India' oo laga dhisay hareeraha biyaha ee Mumbai Harbor xilligii British Raj.
Magaca Bombay wuxuu ka yimid Bom Bahia ("The Good bay" oo af Burtuqiis ah), waa magac uu bixiyay sahamiye Francis Almeida. Mumbai waxaa loogu magac daray ilaahadda Mumba devi ee bulshada Koli.
Gobollada Mumbai - Khariidad midabbo lagu calaamadeeyay
South Mumbai (Fort, Colaba, Malabar Hill, Nariman Point, Khadadka Marinka, Tardeo)
Meelaha ugu da'da weyn Mumbai, waxaana loo tixgeliyaa inay tahay wadnaha caasimada ganacsiga ee Hindiya. Xaafadaha ugu qanisan dalka waa halkan, kuwaas oo ka amar qaata heerarka hantida ugu sareysa adduunka. Qiimaha guryaha ee Koonfurta Mumbai ayaa la barbardhigi karaa kuwa Manhattan. Tani waa aagga dalxiis ee aasaasiga ah ee Mumbai waxayna hoy u tahay inta badan matxafyada magaalada, qolalka farshaxanka, baararka, maqaayadaha sare iyo Iridda Hindiya.
Koonfurta Mumbai (Byculla, Parel, Worli, Prabhadevi, Dadar)
Waxay ahaan jirtay xudunta warshadaha ee Mumbai, laakiin waxay hoos u dhacday markii ay warshadaha sameeyeen. Hadda aaggan waxaa dib loogu rogay goob xafiis cad-cad. Guri u gaar ah xayawaanaadka Mumbai, wejiga badda Worli, iyo macbudka waxa dadku u tixgeliyaan ilaahnimada ilaaliyaha magaalada. Markaad u dhaqaaqdo woqooyiga, waxay ku wareegeysaa deegaan heer sare ah.
Waqooyiga Central Mumbai (Dharavi, Matunga, Vadala, Sion, Mahim)
Ugu horreyntii waa aagga dabaqadda dhexe, marka laga reebo Dharavi, oo ay ku jiraan xaafadda labaad ee ugu weyn Aasiya. Aaggan ayaa isla markiiba la horumaray ka dib xorriyadii Hindiya, sababtoo ah hijro soogalooti ah. Qayb ka mid ah muhaajiriinta ayaa qaxooti ka ahaa qaybta.
Galbeedka Mumbai (Bandra, Khar, Santa Cruz, Juhu, Vile Parle, Andheri, Versova)
Waxay hoy u tahay kuwa hodanka ah ee doonaya inay ku hareeraystaan ​​nabad. Waxay leedahay xeebo yar. Hoy u tahay bulsho weyn oo masiixi ah iyo kaniisada ugu caansan magaalada. Tani waa halka ay sidoo kale ku yaalliin garoomada diyaaradaha ee gudaha iyo kuwa caalamiga ahiba.
East Mumbai (Xaafadaha Bartamaha) (Kurla, Vidyavihar, Ghatkopar, Vikhroli, Kanjur Marg, Bhandup, Mulund, Powai, Thane, Bhiwandi, Dombivli, Kalyan)
Tani waa bastion dabaqadda dhexe ah. Mulund iyo Ghatkopar waxay hoy u yihiin dad u badan dabaqadda dhexe iyo sare, qaar badan oo ka mid ah bulshada ganacsatada ah ee Gujarati. Thane waxaa ku noolaa dad ka soo jeeda beelaha Agri iyo Koli, tuulooyinkoodiina ilaa maanta waa sida "Chendani Koliwada", "Kopari Goan", iyo "Uthalsar". Waxa kale oo ku jira Majiwade, Balkum, Dhokali, Kolshet, Wadavli, iyo kuwo kale. Sannadkii 1825, markii Ingiriisku sahaminayey dhulalka cusub ee ay qabsadeen ee Bassein, waxay ogaadeen in Thane ay ku noolyihiin ugu horrayn Roman Katoolig, oo asal ahaan u dhashay iyo Boortaqiis, iyo in kan dambe uu yahay mid aan la kala garan karin [xigasho loo baahan yahay] tan hore ee midabka maqaarka caado. Tuulooyinka maxalliga ah, sida Kolis (kalluumeysatada), waxaa loo beddelay Katoolik asaliga ah oo u badan tuulooyinka Chendani, Koliwada, iyo Majiwada. Dadka Agri iyo Koli waxay leeyihiin dhaqan u gaar ah. [Xigashooyin waa loo baahan yahay] Qaar ka mid ah qoysaska sare ee ka soo jeeda Bariga Hindiya ee ku nool qaybta Khatri ee Thane weli waxay ku hadlaan Boortaqiis.
Xaafadaha Harbor (Chembur, Mankhurd, Govandi, Trombay)
Kahor horumarinta Navi Mumbai oo ah magaalo dayax gacmeedka Bombay, aaggan waxaa horay loogu yaqaanay jiritaanka xarun cilmi baarista atomiga ah. Hadda tan waxaa loo yaqaanaa inuu ku socdo Navi Mumbai.
Waqooyiga Mumbai (Manori, Jogeshwari, Borivali, Gorai, Dahisar)
Lahaa xeebo aan wasakh lahayn. Marka laga reebo tan, waa dhibbane kale oo Bombay ku fiday. Waxay ka kooban tahay Sanjay Gandhi National Park iyo goobaha dhaxalka ugu faca weyn ee Mumbai: Kanheri, Mahakali, Jogeshwari, iyo Mandapeshwar macbudyo dhagaxa laga jaray oo ka bilawday qarnigii 1aad ee dhalashadii Ciise ilaa iyo qarnigii 5aad AD Global Vipassana Pagoda waa taallo xusid mudan oo ku taal Gorai. Pagoda-ka ayaa lagu andacooday inuu u adeego sidii taallo nabadeed iyo wada noolaansho. Taalladan waxaa furay Pratibha Patil, Madaxweynaha Hindiya sanadkii 2009. Waxay ku taal woqooyiga Mumbai aag la yiraahdo Gorai waxaana laga dhisay dhul loogu deeqay jasiirad u dhexeysa biyaha Gorai iyo Badda Carbeed. Dunida 'Essel world', jardiinada madadaalo ee ugu weyn Hindiya sidoo kale waxaa laga helaa jasiiradda Gorai, oo ay weheliso pagoda caalamiga ah ee vipassana.
Mumbai waa magaalo laga dhisay mowjado tahriib ah oo is xigxigay. Xaafaduhu waxay dabeecadooda ka heleen beelihii markii hore degay. Xaafadahaani waa kuwo aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin mana jirto qaab caadi ah oo la aqbali karo oo xaafadahaas loogu geyn karo degmooyin waaweyn. Laakiin qiyaas ahaan, laga bilaabo koonfurta ilaa woqooyiga, tani waa sida magaaladu u horumarisay.
Wax lagu xardhay Godadka Elephanta
Mumbai waa magaalo mashquul badan, magaalooyin kala duwan oo leh dabeecad u gaar ah. Ruuxda ganacsiga iyo socodka xawaaraha nolosha waxay siineysaa farqi aad u weyn inta badan Hindiya inteeda kale.
Waxaa jiray doodo badan oo ku saabsan magaca asalka ah ee magaalada. Qaar waxay dhahaan magaca haatan ee magaalada Mumbai waa magaca asalka ah; waana eray bixin laga soo qaatay "Mumba", magaca ilaaha Hinduuga maxaliga ah ee Mumbadevi, iyo "Aai", oo macnaheedu yahay "hooyo" Marathi. Kuwo kale waxay ku andacoodaan in Bombay uu ahaa nuuca loo yaqaan 'Bom Bahia', oo ah magac uu Bortuqiisku u bixiyey "Bay qurux badan" oo markii dambena Ingiriisku caan ka dhigay magaca gobolka Bombay.
Magaca ayaa si rasmi ah looga beddelay Bombay loona beddelay Mumbai 1995. In kasta oo Bombay iyo Mumbai labadaba la isticmaalo, dadka si cad u adeegsada "Bombay" guud ahaan waa dad aan ku hadlin Marathi halka kuwa "Mumbai" u doodaa ay ugu horrayn ku hadlaan Marathi. Galbeedka, Mumbai waxay noqotay mid si aad ah loo aqbalo si looga fogaado muran. Magaalada sidoo kale waxaa loogu yeeraa ond मुंबई ("Mumbai").
In kasta oo toddobada jasiiradood ee hadda magaaladu ka kooban tahay ay leeyihiin taariikh taariikhi ah oo la duubay sida meel kasta oo kale oo Hindiya ka mid ah, safarkoodii ay ku dhisayeen magaalada Mumbai runti waxay bilaabeen 1498, markii Bortuqiisku kala wareegay Suldaankii Gujarat. Waxay dhisteen degsiimo, qalcado, iyo kaniisado, (oo ay kujiraan Kaniisadda Boortaqiiska ee la yaabka leh ee ilaa maanta taagan) Si kastaba ha noqotee, wax badan kama qaban karin hantidooda waxaana toddobadii jasiirad lagu wareejiyay Ingiriiska 1661 oo qayb ka ahaa meherka Catherine de Braganza markay guursatay Charles II ee reer England. Sidoo kale isagu aad uma xiisaynayn jasiiradaha, wuxuuna ka kireeyay shirkadda British East India Company sanadkii £ 10 sanadkii 1668. Shirkadda East India waxay dhistay dekedda, goobaha ganacsiga, iyo qalcadda abuuri doonta xarunta neerfaha. ee magaalada. Waxay sidoo kale bilaabeen howlihii dheeraa ee dib u soo celinta dhulka iyo ku biirida jasiiradaha, waxqabad socday ilaa 1960s.
Dekeddu waxay soo jiidatay warshado iyo bulshooyin ganacsi sida Parsis, Gujaratis, iyo Marwaris (oo ka yimid Rajasthan) way haajireen oo waxay aasaaseen shirkado ganacsi iyo warshado dabayaaqadii qarnigii 19aad. Warshaduhu waxay soo jiiteen shaqaale muhaajiriin ah oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dalka. Hirarkii is xigxigay ee tahriibka waxay qaabeeyeen astaamaha magaalada iyo xaafadaha.
Magaalada ay ku mutaysatay jiritaankeeda dadaalkii Ingiriiska sidoo kale waxay ahayd halkii uu ku dhashay Golaha Qaranka ee Hindida, kaasoo door muhiim ah ka ciyaaray dhaqdhaqaaqii xorriyadda. Magaalada ay warshadeeda ka dhisteen warshadleyda dalka oo dhan waa caasimada Maharashtra, oo lagu xardhay xariiqyo luqadeed dadka ku hadla Marathi.
80maadkii, kharashka shaqaalaha badan iyo qalalaasaha ayaa qasbay in la xiro warshado badan oo dharka ka sameeya magaaladiina waxay gashay hoos u dhac taas oo ay ka bilaabatay soo kabashadeeda kaliya dabayaaqadii 90s. Tirada badan ayaa culeys saartay kaabayaasha dhaqaalaha. Tareenka iyo isku xirka wadada ayaa si isdaba joog ah u soconayay 90-meeyadii, laakiin baaxadda hawsha darteed, waddooyinka waxay u muuqdaan kuwo si isdaba joog ah u socda dhismo. Mumbai hadda waxay dib u soo cusbooneysiisay inay xarun u tahay warshadaha Adeegga.
Bishii Janaayo 1993, kadin burburkii Masjidka Babri ee magaalada Ayodhya, mowjado rabshado ah ayaa hareeyay magaalada, iyadoo ladilay dad kor u dhaafaya 1,000 qof, kuwa ugu badanna ay ahaayeen muslimiin. Xiriirka ka dhexeeya qowmiyadaha kala duwan ee magaalada ayaa ahaa mid kacsan tan iyo wixii ka dambeeyay, iyada oo dhowr caro argagaxiso ay ku sii dareen shidaalka dabka.
Dhaqanka iyo dabeecadaha
Mumbai waa magaalada ugu caansan Hindiya. Marka la barbardhigo dalka intiisa kale, magaaladu waa mid xor ah. Soogalootiga joogtada ah ee ka imanaya Hindiya inteeda kale, muwaadiniinta, oo caan ku ah 'Mumbaikers', waxay muujiyeen dulqaad muuqda oo xagga dhaqamada kale ah, taas oo ka dhigaysa inay tahay baraf dhaqan oo dhab ah. Si kastaba ha noqotee dulqaadkan ayaa mararka qaar u foorarsaday cadaadis dibadeed. Intii u dhaxeysay 60s-80s, waxaa jiray ciil ku saabsan kuwa aan ku hadlin Marathi oo shaqooyin iska qaada. Rabshadihii 1991 iyo 1993 ee u dhaxeeyay Hindus iyo Muslimiinta ayaa saameyn ku yeeshay ruuxaan; si kastaba ha noqotee, magaaladu waxay ku guuleysatay inay ka soo kabato kuwan, mar labaadna waxay ku faraxsan tahay inay muujiso runta 'ruuxa Mumbai'.
Mumbai waxay leedahay saddex xilli oo waaweyn - xagaaga, monsoon, iyo jiilaal (xagaaga oo ka fudud). Waqtiga ugu wanaagsan ee la booqan karo waa xilliga qaboobaha inta u dhexeysa Nofeembar iyo Febraayo. Qoyaanka sidoo kale wuu yaryahay xilliga qaboobaha, marka cimiladu fiicantahay; heerkulka ugu yar waa 17 ° C kan ugu badana waa 30-31 ° C. Xagaagu waa laga bilaabo Maarso ilaa Maajo, iyo sidoo kale bisha Oktoobar oo leh heerar hoose oo hoose illaa 30s (qiyaastii 80-90 ° F). Waa kuleyl iyo qoyaan xilligan. Juun ilaa Sebtember waa xilliga monsoon-ka oo magaalada ay ka da’aan roobab mahiigaan ah. Magaalada labo jeer ama seddex jeer ayay daadad ku soo rogtay iyadoo nolosha caadiga ahna ay qas ku jirto xilligan. Cimiladu waa qoyaan badan sanadka oo dhan maxaa yeelay magaaladu waxay ku tiirsan tahay xeebta.
Dalxiis Gaara 4-Saacadood oo Gaarka ah Makhaayadaha ugu Xun Xalaal
Mumbai - Hindiya
Ku bilow safarkan 4-ta galabnimo adiga oo lagaa soo qaadayo hoolkaaga hudheel oo aad u adeegsanayso gaadiid maxalli ah si aad ugu dhadhamiso 8 nooc oo kala duwan oo cunto ah 5 ka mid ah cunnooyinka ugu wanaagsan ee Xalaal ee Mumbai.
Deganaanshaha Ace Mumbai
Hoteelka Galbeedka Saaxil ee ugu Fiican Mumbai
Barxadda By Marriott Mumbai Hotel International Airport
Huteel Fariyas Mumbai
Huteelka Fortune Mumbai
Afar Dhibcood Hotel By Sheraton Navi Mumbai
Afarta xilli ee Hotel Mumbai
Hoteelka Caalamiga ah ee Hilton Mumbai
Holiday Inn Mumbai Madaarka Caalamiga ah
Huteelka Madaarka Caalamiga ah ee Mumbai
Dabaaldegga Huteelka Vashi Mumbai
Huteelka hudheelka ee Chembur Mumbai
Hoteelka Midland Mumbai
Hotel Orritel Galbeedka Mumbai
Degenaanshaha Hotel Planet Mumbai
Huteelka Rosewood Mumbai
Hoteelka Sare Mumbai
Furayaasha Hotel Nestor Mumbai
Hooyga Krishna Palace Mumbai
Lakeside Chalet Mumbai - Guryaha Maamulka ee Marriott
Huteel Cusub Bengal Mumbai
Novotel Mumbai Xeebta Juhu
Ramada Powai Hotel & Xarunta Shirarka Mumbai
Renaissance Mumbai Hotel & Xarunta Shirarka
Huteel Satellite Hotel Mumbai
Sofitel Mumbai Hotel BKC
The Dukes Retreat A Furayaasha Resort Khandala
The Emerald - Hoteelka & Guryaha Fulinta Mumbai
Hoteelka Mirador ee Mumbai
Hoteelka Oberoi Mumbai
Huteelka Orchid Ecotel Hotel Mumbai
Deganaanshaha Oriental Mumbai
Hoteelka Park ee Navi Mumbai
Hoteelka Taj Mahal Palace Mumbai
Hoteelka Westin Mumbai Garden City
Hoteelka Trident Bandra Kurla Mumbai
Vivanta By Taj Madaxweynaha Mumbai Hotel
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Hindiya > Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Mumbai
Dhammaan cuntooyinka laga adeegto makhaayadahayagu waa kuwa sharciyeysan oo Xalaal ah, Hoteelkuna waa hanti aan khamri lahayn.